နားဦးတည့်ရာ ကိုး – Happy Wedding Anniversary Song (Mr & Mrs Htut) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Music » နားဦးတည့်ရာ ကိုး – Happy Wedding Anniversary Song (Mr & Mrs Htut)	26
နားဦးတည့်ရာ ကိုး – Happy Wedding Anniversary Song (Mr & Mrs Htut)
Posted by မြစပဲရိုး on Feb 14, 2015 in Music | 26 comments
နင်းနင်း တို့ ဇနီးမောင်နှံ ရဲ့ တစ်နှစ်မြောက် မင်္ဂလာနှစ်လည် မှ
အိုမင်းသည့် အချိန်တိုင် တွဲလက်များ မြဲစေသား။
အိမ်မက်များ လက်တွေ့အကောင်အထည် ပေါ်စေသား။
အချင်းချင်း နားလည် ခွင့်လွှတ် မှုများ နဲ့ ပိုမို ရင့်ကျက် စေသား။
(ဂဇက် ရွာသူ/သား များ ကိုယ်စား) Happy Marriage Anniversary Song
မြစပဲရိုး says: A wedding anniversary is the celebration of love, trust, partnership, tolerance and tenacity.
♪ ♫ ♩ ♬♪ ♫ ♩ ♬ ♪ ♫ ♩ ♬
Happy marriage anniversary … ♪ ♫ ♩ ♬
You survived another year, so scary, ♪ ♫ ♩ ♬ lol:-)))))
အချစ်​ကံ​ခေ​ပေမယ့်​ အနှစ်​ကျန်​​စေချင်​တဲ့ ဂီ says: ဥ​ကျောက်​စ့်​အန်​နီဗာစရီက အင်​ဒီပန်းနန့်​စ့်​​ဒေးဗျ
မြစပဲရိုး says: ဟဲ့ အိပ်ချင်မူးတူး နဲ့ ထင်ရာ စွပ်ပြောနေရော။
ကျောက်စ် တို့ က လွတ်လပ်ရေးမှာ လွတ်လပ်ရေး ဇာတ်သိမ်း ပြီး မှန်း သိတယ်ကွဲ့။
ဒါက နင်းနင်း (a) ရေမြေသနင်း (a) ကိုထွဋ် ။
မင်း မန်မိုရီ ကသာ ရှိပြီး သား ပြုတ် နေတာ နေမှာ။
Yae Myae Tha Ninn says: ဟုတ်ပါ့.. အရီး … ပြောပြလိုက်ပါ… :P
သူပဲ အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့ကို… :P
ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပါ… လာရောက်အားပေး မန့်သွားတာ အထူးအထူး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်… Was this answer helpful?LikeDislike 1327
Yae Myae Tha Ninn says: အရမ်းအရမ်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. အရီး… တကယ်ကို အမှတ်တရ ဖြစ်ရပါတယ်… တကယ်ကို တိတ်တိတ်လေးပဲ ၂ ယောက်သား ကျင်းပကြတာပါ… အရီးက အမှတ်ရနေတာ အရမ်းကို ပျော်ရွှင်ရပါတယ်… သီချင်းလေးကလဲ ပါးစပ်ကို မစိရဘူး… ရီနေရတယ်… အရုပ်ကလေးကလဲ ချစ်စရာ တအားကောင်းပါတယ်… လာရောက်မန့်ပေးကြတဲ့ ရွာထဲက ညီအစ်ကို မောင်နှမများအားလုံးလဲ အထူးအထူးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျား… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: Happy anneversary to Ninn Ninn and Mee Wah.
Happy birthday to Ninn Ninn and all the best to you.
Yae Myae Tha Ninn says: ကျေးဇူးပါ… ဇီဇီ… အားလုံးကို မှတ်မိနေလို့ ကျေးဇူးပါ… အထူးသဖြင့် မိန်းမကို မိဝါလို့ သိတဲ့အတွက်ရော… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3276
pooch says: Havea100 anniversary!!!!!
Yae Myae Tha Ninn says: ပေးတဲ့ ဆု နဲ့ ပြည့်ပါရစေ … မယ်ပုလေး… ကျေးဇူးပါနော်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7172
Mike says: .Happy marriage anniversary မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ .သားကောင်းသမီးကောင်း .ရတနာလေးများမွေးဖွားကြပြီး ဘ၀မှာအောင်မြင်ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေဗျာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1327
Yae Myae Tha Ninn says: ဟုတ်ကဲ့ပါ.. ဦးမိုက်… ကျေးဇူးပါ… ရတနာလေးတွေ အတွက်လဲ ဦးမိုက်ပြောသလို စုနေပါပြီဗျာ… အရမ်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်..ခင်ဗျာ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1191
Kaung Kin Pyar says: .ပျော်စရာကောင်းသော နှစ်ပတ်လည်နေ့မှသည်…..ရာသက်ပန် အေးချမ်းသာယာပါစေ..ကိုထွဋ်ရေ့….
Yae Myae Tha Ninn says: ကျေးဇူးပါ ကောင်းကင်ပြာရေ… အကို စိတ်ညစ်နေတဲ့ အချိန်နဲ့ ညီမလေး ပို့စ်တင်တာနဲ့ ကွက်တိမှာ စိတ်ညစ်စရာတွေ မေ့လျော့သွားစေတာအတွက်လဲ ကျေးဇူးပါ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1317
Crystalline says: Happy Anniversary..
Yae Myae Tha Ninn says: ကျေးဇူးပါနော်… ခရစ်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: ရွာထဲမှာတဖန်ပြန်လည်မွေးဖွားလာသော ရေမြေ့သနင်း ပြည့်ရှင်မင်းတို့ ဇနီးမောင်နှံရဲ့ တစ်နှစ်ပြည့်မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်မှသည် ဘ၀တလျှောက်လုံး ကောင်းကျိုးချမ်းသာအဖြာဖြာနဲ့ ပြည့်စုံပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်။
ရွာ့တူလေးရဲ့ မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်ကို မှတ်မှတ်ရရ ဆုတောင်ပေးတဲ့ ရွာ့အရီးကိုလည်း ချီးကျူးပါတယ်။
(ကိုယ်လည်း လှေကြုံလိုက်ပြီး ဆုတောင်းပေးလိုက်နိုင်လို့) Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1327
Yae Myae Tha Ninn says: ဟုတ်ကဲ့ပါ… အန်တီမမရေ… ပေးတဲ့ဆုတွေလဲ ပြည့်ပါရစေခင်ဗျာ… ရွာက ချစ်ဖို့ကောင်းတာကိုး… ဒါကြောင့် ပြန်ဝင်လာတာပါ… အရီးကတော့ တကယ့်ကို အမှတ်တရ ဖြစ်စေပါတယ်ခင်ဗျာ…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12069
အလင်းဆက် says: သိပ် ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အရီး
Yae Myae Tha Ninn says: ကျေးဇူးပါနော်… ဆက်ဆက်… ဟုတ်တယ် သိပ်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ရွာလေးပါ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4718
padonmar says: me too :D
Yae Myae Tha Ninn says: အန်တီဒုံလဲ ကျေးဇူးပါနော်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14410
kai says: ဖေဖော်ဝါရီက.. မြန်မာတွေအတွက်တော့.. တော်တော်အလုပ်များတဲ့လပဲ..
၁၃ – သခင်အောင်ဆန်းမွေးနေ့
၁၄ – ချစ်သူများနေ့…။ Me 3!
Yae Myae Tha Ninn says: ဟုတ်ပါ့.. တဂျီးရယ်… ၁၃ ရက်နေ့က ကျေးဇူးရှင်ကြီး မွေးနေ့… ၁၄ က ကျေးဇူးရှင်လေး နဲ့ ဒန်တန့် ဒန်… :P
Ma Ei says: .တစ်နှစ်မှစ နှစ်တစ်ရာတိုင် မြဲခိုင်သောတွဲလက်များဖြင့်
.အောင်မြင်သော ဘ၀ခရီးကို ပျော်ရွှင်စွာ
Yae Myae Tha Ninn says: ဟုတ်ကဲ့ပါ… အန်တီအိရေ… ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါရစေခင်ဗျာ… အမှတ်ရနေတာတော့ ဆန်းဒ၀ှိက်လေးပါ… တကယ်ကို စားကောင်းခဲ့ပါတယ်… အခွင့်ကြုံသေးရင် စားပါရစေဦးလားဗျာ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 176
La Yeik says:ံHappy Anniversary both of you….